Miarahaba antsika rehetra, Fandraisana ny fanasan'ny Tompo amin'ny alahady ho avy izao ka dia mampiomana antsika rehetra amin'izany ! Amin'ny 11 ora no fidirana, ao amin'ny Faculté de théologie Protestante hatrany ( CUP). Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy
Salama Araky ny calendrier-tsika ao dia hisy fampianarana ny alahady 8 May ho avy izao, fampianarana miompana indrindra amin'ny faka-panahy sy ny fizahan-toetra ary ireo kristiana izay mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, arak'izany dia miato ny activitény sampana alahady izao, ny fidirana kosa dia hanomboka amin'ny 10 ora. Aorian'ny fampianarana dia hiatrika ny culte arahina fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy no samia mahatsiaro ambavaka ny fotoana.
Hetsika KTLM FLME Marseille 07/05/2022
Fotoana 13 mars 2022
Salama. Mampatsiahy antsika fa araka ny calendrier izay efa nampitaina dia Fampianarana momba ny FANOLORAN-TENA ny alahady maraina ho avy izao izay hanomboka @ 10 ora maraina mialoha ny Culte ao @ CUP. Izany dia hanasana antsika fiangonana manontolo. Tsy hisy araka izany ny fampianarana Sekoly alahady io maraina io. Tahin’i Jesosy
Fifidianana ny birao sy ny komitin'ny FDL
Salama. Mampatsiahy sy manentana antsika rehetra @ fotoana isan-telovolana atao any Marseille ny asabotsy sy ny alahady ho avy izao. Itsy efa nampitaina etsy ambony ny programa. Araky ny efa fantatsika ihany koa dia ny asabotsy ho avy izao, mandritran'ny isan-telovolana no hanatanterahana ny fifidianana ny birao sy ny komitin'ny FDL ny fileovana, asaina isika FDL mba samy hiomana amin'izany.
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny rahanmpitso Alahady 20/02 dia ho tanterahana ao @ CUP. Fidirana @ 11 ora. SALOMA : Tsy hisy ny fampianarana sekoly alahady. Hisy ny asa sy fampaherezana. Indro ny tatitra momba ny rakitra farany. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Isan-droa volana 05-06/02/2022
Indro omena anao ETO ny programan'ny isan-droa volan'ny Fitandremana Montpellier. Sabotsy 05 sy Alahady 06 febroary 2022 Toerana : FLME MONTPELLIER Adresse: 14 rue des Escholiers Saint Jean de Vedas 34430 (Salle Tourrière)
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 23/01 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora. SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo. Ho tanterahana aorinan’ny fotoam-mpivavahana ny famangiana an’i Valentine mianakavy. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Miarahaba antsika rehetra. Ny fotoam-pivavahana ny Alahady 16/01 ho avy izao dia ho tanterahana ao @ CUP (salle Henri Bois na Chapelle). Fidirana @ 11 ora. SALOMA : Hisy ny fampianarana sekoly alahady izay miditra @ 10 ora. Hisy ny asa sy fampaherezana. Ny Tompo anie hitahy antsika.
Krismasin'ny Toby 22-23/01/2022
Ry havana, Hampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin' Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Pastora‚ ny Raiamandren’ny Toby ary ny Birao komitin’ny Toby Pouru Saint-Rémy dia faly miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana ho anay ny manasa anareo amin' ny fankalazana ny Krismasin'ny Toby ny Asabotsy 22 janoary sy ny Alahady 23 janoary 2022 , ny toerana hivoriana dia ao amin'ny salle de fête de POURU AUX BOIS ary manomboka amin'ny 5 ora hariva (17h ) ny fotoana. Hisy ny fisavana pass sanitaire, koa aoka samy hiomana amin'izany isika. Araka ny fandaminana dia tsy hisy ny fiaraha misakafo, ary ny tsirairay no hikarakara ny toerana izay hatoriana. Dia maniry ny fahatongavanareo maro mba hiarahantsika rehetra mifaly amin'izany fotoan-dehibe izany. Manao veloma finaritra anareo amin'ny anaran' i Jesosy Kristy Tompo. Amin’ny anaran’ny biraon’ny Komiin’ny Toby Ny filoha Dr ANDRIAMBOLOLONA Jean
Salama e. Miarahaba antsika rehetra tratry ny taona vaovao 2022. Mirary ny soa sy ny tsara rehetra ary samy mba ho tahian’Andriamanitra daholo isika rehetra. Fampatsiahivana fohy fa ao @ CUP no hankalazantsika ny alahadin’ny Epifania rahampitso. Hatomboka @ 11ora ny fotoana. Tahin’i Jesosy.
Tratry ny taona 2022
" Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay." Salamo 121, 8 Izany Tenin'Andriamanitra izany no entinay mianankavy miarahaba anao sy ny ankohonanao hiatrehana izao taona vaovao 2022 izao. Mirary taon-jina ho any tsirairay homban'ny fitahin'i Jesosy